Caawi Nice | Taageerada Ganacsatada iyo Bilaabashada
Taageerada Dijitaalka ah ee Meheradaha Maxalliga ah
Samaynta dukaan internetka ah
Suuq geynta dariiqooyinka cusub ee aad usii waddo u adeegida macaamiishaada
Magacaabista iyo naqshadaynta
Dalbashada khadka tooska ah iyo habka iibka
Sanduuqa waxaa loogu talagalay inuu siiyo deeq fanaaniinta asaliga ah iyo ganacsatada kuwaas oo dhaqaalahooda saameyn ku yeeshay cudurka faafa ee COVID-19.
Dhammaan ganacsiyada ka hooseeya 500 oo shaqaale, oo ay ku jiraan labadaba ganacsiyada diiwaangashan iyo kuwa aan diiwaangashanayn, ganacsiyada iskood u shaqeysta iyo qandaraaslayaasha madaxabannaan, iyo la taliyayaasha.
Barnaamijka Amaahda Ganacsiga ee Soo Baxaya
Qaddarka ugu yar ee ay bixiso DEED deynta waa $ 5,000 ugu badnaana waa $ 150,000.
Barnaamijku wuxuu maalgelin doonaa kharashyo kala duwan oo bilow ah iyo balaadhin, oo ay ku jiraan kharashyada caadiga ah sida mashiinnada iyo qalabka, alaabada iyo soo-ururinta, raasamaalka shaqada, dhismaha cusub, cusboonaysiinta, iyo iibsashada goobta. Maalgelinta deynta jirta looma oggola.
Bilaabeyso Deeqda MN - Gurisiinta-Daryeelka-Ilmaha
La bilaabo Minnesota
Ganacsadayaasha u qalma ayaa hela deeqo ilaa $ 7,500
Sanduuqa cusub ee Booz Allen
Haayada Booz Allen
Lacag-la’aanta ayaa dalbankarta deeqaha illaa $ 100,000.
Shakhsiyaadka, kooxaha shaqsiyaadka, iyo ururada u-qalma waxqabadka waxay dalban karaan deeqaha micro-ga ah oo gaaraya illaa $ 10,000.
Iyada oo loo marayo Sanduuqa Hal-abuurka, aasaaska ayaa si gaar ah u bar-tilmaameedsanaya xalalka iyo mashaariicda dhisi doona adkeysiga bulshada ee waarta iyadoo la ilaalinayo dadka nugul iyo shaqaalaha safka hore ama siinta amni ku soo laabashada shaqada.
Juun 5, 2020
Microsoft - 6 Qalab Bilood Bilaash ah
Barnaamijyada xafiiska ku saleysan ee shabakada iyo adeegyada ganacsiga. Aaladaha miisaska kumbuyuutarka lagu soo darin
Hel emayl, kaydinta faylka iyo wadaagga, kulammada, iyo farriimaha degdegga ah
Shan lakab oo amni iyo kormeer ah ayaa ka caawinaya ilaalinta xogtaada mid amaan ah
Dammaanad 99,9% waqtiga
Qorsheynta Kala-goynta ee Contagion
Nidaamyada Taageerada Caafimaadka, LLC
Adeegyadeenna yaraynta shilalka waxay ka caawin karaan ganacsiyadu inay albaabadooda u furnaadaan muddo dheer, yareeyaan waqtiga howgallada ganacsi ay xirayaan, ama xitaa ka caawiyaan meherad xiran inay si dhakhso leh u socdaan. Qofna ma aha inuu doorto inuu kala ilaaliyo nabadgelyada shaqaalaha iyo inuu sii joogo ganacsigiisa.
Hoos udhac Faahfaahin Xanuunka Shaqaalaha
Lambarada hadal. Xitaa hoos u dhac yar oo ah saacadaha shaqaalaha lumay cudur dartiis waxay u urursan doonaan kharash badan keydinta meherad kastoo badbaadinaysa kumanaan iyo kumanaan kun oo doolar. Dabcan, hadafku waa in laga soo kabto wax badan oo ah “maalmo xanuun” shaqaalaha intii suurtagal ah adoo ka dhigaya meel aamin ah oo caafimaad qaba, iyada oo loo marayo bartilmaameed, dadaal joogto ah oo maalinle ah.
Helitaanka Iibiyaha IT
Nidaamyada Taageerada Caafimaadka, LLC waxay iskaashi la sameysay shirkad maxalli tikniyolojiyadda macluumaadka maxalliga ah si ay uga caawiso hubinta ganacsiyada inay si amaan ah ugu oggolaadaan shaqaalaha inay ka shaqeeyaan guriga.
Sii wadida waxbarashada & tababarka
Yaraynta halista cudurada faafa ma ahan qalliin hal mar ah. Waxaan bixinaa qayb ka mid ah Shahaadadayada Contagion Shahaadada ee ah Tababbarka Difaaca Shaqsiyeed ee OSHA, Tababbarka Saabuunta & Nadaafadda, Qorista tababarka shaqaalaha, iyo inbadan.
Shahaadada Mitigation Contagion
Wada xiriirinta in xarun meheraddu ay ammaan ku tahay martida iyo shaqaaluhuba waa muhiim si loo helo goob shaqo oo hufan. Shahaadada Ka-Hortagga ee Contagion wuxuu dirayaa farriin cad in meheraddaadu aysan kaliya dan ka lahayn shaqaalaheeda iyo macaamiisheeda fayoobaanka laakiin ay leeyihiin tababar ay ku ilaashadaan amaankooda iyo caafimaadkooda markii cudur faafa uu wareegayo.
Barnaamijka Deynta MN iyo Barnaamijka amaahda Ganacsiga Ciidamada hore
Hal mar, amaah aan dulsaar lahayn $ 5,000 ilaa $ 20,000.
Bilaabida Barnaamijka Dammaanad Qaadashada Ganacsadaha
BND waxay ogolaan kartaa dammaanad qaadka oo ah $ 5,000 ganacsadaha bilowga ah ee kharashyada bilowga ganacsiga oo ay ku jiraan xisaabinta, sharciga iyo qorsheynta ganacsiga.
Bangigu wuxuu ku ansixin karaa dammaanad qaadka amaah ah illaa $ 25,000 isaga oo aan u baahnayn heshiis amaah ah.
Barnaamijka Faa'iidada Bulshada ee SBA 7a
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo ikhtiyaar maaliyadeed oo loogu talagalay bilaabista ganacsi yar ee jaaliyadaha aan haysan.
Amaah ilaa $ 250,000 (ugu yaraan 10% hoos u dhigga lacagta).
Eeg qaybaha maalgalinta gudaha.
Barnaamijka Soo iibinta Dulsaarka
Waxaa laga heli karaa Gobolka Hettinger
Amaahan ilaa $ 5,000 bilowga ganacsiga iyo horumarka
Aruurinta amaahda ee Bowman-Slope waxaa loo sameeyay inay ka caawiso bilowga ganacsiga iyo balaadhinta gudaha Degmooyinka Bowman iyo Slope.
Lacagaha ayaa guud ahaan loo adeegsadaa inay ku iibsadaan dulsaarka deynta qalabka, xoogaa cusboonaysiinta iyo mashaariic kale.
Lacag ayaa laga heli karaa ganacsatada degmada Cavalier County.
Miisaaniyada waxaa loo qaabayn doonaa sidii 0% amaah ah, oo lagu bixin karo $ 100.00 qeybkiiba bil kasta ilaa deynta lagu qanco.
Loo adeegsan karo meheradaha ku yaal Aagga Dib-u-Dhiska.
Ilaa $ 5,000.00 ayaa laga heli karaa meherad shaqsiyadeed oo ku saleysan qaan-sheegashada dhabta ah.
Magaalada Forman waxay bixisaa dhiirigelin si loo caawiyo ganacsiyada cusub iyo kuwa hadda jira ee ka jira magaalada.
Dhiirrigelintaas waxaa ka mid ah dhiirrigelinta adeegyada magaalada iyo deeqaha bilowga, xoojinta, iyo ballaarinta.
Magaalada Forman waxay u abuurtay dhiiri galintan canshuurta ganacsiyada bilowga cusub, cusbooneysiinta, ama fidinta.
Guji xiriirinta si aad u aragto qiimaha dhiirigelinta.
Laba doolar oo $ 1 milyan oo barkadaha wareega ah ayaa la sameeyay 2007 iyo 2009 si looga caawiyo bilowga ganacsiga, balaadhinta iyo haynta Mandan iyo hareeraha 10-mayl ee ku xeeran degmada Morton.
Deynta IRP kama yaraan karto 50% baahiyaha maalgelinta iyadoo ugu badnaan $ 250,000 mashruuc kasta.
Inta badan amaahda waxaa loo oggol yahay 10 ilaa 25% xirmada maalgelinta.
Barnaamijkani wuxuu bixiyaa caawinaad ganacsi cusub ama sii fidinaya Ellendale, ND.
Devils Lake waxay u sameysay barnaamijyo dhiirigelin ah taxanaha ah iyo ganacsiyada ka jira aagga.
$ 5,000, $ 7,500 ama $ 10,000 deyn dulsaar la'aan ah
Lacagta amaahda ee la helay dib ayaa loogu soo celiyaa santuuqa si ay ugu sii socoto inuu soo noqdo
Barnaamijkani wuxuu bixiyaa lacag lagu kobcinayo ganacsiga yar yar, loo abuuro shaqooyin cusub, iyo xoojinta dhaqalaha bulshooyinka miyiga.
LADG waxay kaloo caawimaad siisaa ganacsatada ka qeybqaata barnaamijka una baahan helitaanka qalab dheeraad ah oo ka caawiya ganacsigooda inay guuleystaan.
Ujeedada maalgalintan ayaa ah in la bixiyo dhiirigelin maalgelinta bilowga ganacsiga iyo balaadhinta gudaha degmada Renville.
Ujeeddada koowaad waa in la abuuro shaqooyin cusub, la badbaadiyo shaqooyinka jira, la ballaariyo saldhiga canshuuraha ee degmada, la kordhiyo maalgashiga raasamaalka, lana ballaariyo waaxda aasaasiga ah iyo saldhigga maaliyadeed ee aagga.
Waxaa jira xoogaa is beddello ah oo ka dhex jira barnaamijkan, oo lacagaha loogu qaybiyo sida ay doorbido guddiga RCJDA.
Dhammaan amaahda ayaa ah dulsaar la'aan.